Zavamananaina biolojika azo ampiasaina
Vokatra Centrifuge fantsona
Kitapo plastika ankapobeny
Fonon-tanana azo ampiasaina amin'ny fitsaboana Covid-19
Andian-tsarimihetsika tsy voatenona Covid-19 azo ampiasaina
Takelaka kolontsaina sela sy tisy
Torohevitra ho an'i Beckman
Ny takelaka rehetra dia amboarina ao amin'ny trano fidiovana LIFAN hiantohana ny kalitaon'ny molekiola. Ny takelaka polypropylene isan-karazany dia manome vahaolana tena tsara ho an'ny fitahirizana santionany sy ny fananganana andrana, ahafahan'ny fikirakirana sy aliquot tantana, hitahiry na hitaterana mora foana. Ny takelaka rehetra dia endrika ANSI ho an'ny mifanentana amin'ireo rafitra mandeha ho azy.
Torohevitra Robotic ho an'ny Agilent
LIFAN Robotic Tip dia noforonin'ireo injeniera efa za-draharaha, ary vokarina amina tontolon'ny efitrano fidiovana 100 000, dingana miaraka amin'ny akora premium. Alohan'ny hanaterana ny mpanjifantsika, ny vokatra rehetra dia alalàn'ny fizotran'ny QC henjana voamarina amin'ny ISO 9001, rafitra fitantanana kalitao ISO13485, hiantohana ny kalitao avo indrindra. Manome toky izahay fa ny vokatra rehetra dia tsy misy DNase / RNase, ary tsy pyrogenika hahatratra ny fenitra avo indrindra amin'ny andrana laboratoara sy ny diagnostika amin'ny klinika.
LIFAN Robotic Tips dia amboarina amin'ny Polypropylene avo lenta avo lenta. Ny sehatry ny toro-hevitra dia vokarina amin'ny alàlan'ny fizotrany manokana. Ity fizotrany ity dia mahatonga ny tendrony anatiny ho lasa hydrophobic, ka mampihena be ny fatiantoka santionany ary manome reproducibility ambony kokoa rehefa miasa miaraka amin'ny haino aman-jery mitsikera.
LIFAN dia manolotra vahaolana OEM feno momba ny toro-hevitra ho an'ny rafitra mandeha ho azy isan-karazany. Ireo toro-hevitra mandeha ho azy dia amboarina amin'ny famaritana maranitra eo ambanin'ny fanaraha-maso henjana ary mivondrona amin'ny alàlan'ny automatisation mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny fiainana sy ny kalitaony.
Torohevitra robotic ho an'i Hamilton
Torohevitra robotic ho an'ny Tecan (Teken)
Torohevitra pipet fihazonana ambany
Panaran'ny roduct: toro-hevitra pipette fihazonana ambany / toro-hevitra pipette ambany fitrohana
LIFAN Torohevitra pipet fihazonana ambany dia vokarina avy amin'ny Polypropylene avo lenta faran'izay mazava. Ny sehatry ny toro-hevitra dia vokarina amin'ny alàlan'ny fizotrany manokana. Ity fizotrany ity dia mahatonga ny tampon'ny atiny ho lasa hydrophobic lehibe, noho izany dia mampihena be ny fatiantoka santionany ary manome reproducibility ambony kokoa rehefa miasa miaraka amin'ny haino aman-jery mitsikera.
Torohevitra Pipette manerantany
Anaran'ny vokatra: Torohevitra Pipette Universal
LIFAN Universal Pipette Tips dia amboarina avy amin'ny Polypropylene avo lenta avo lenta. Pipette Micro Tips dia vokatra azo zakaina tsara ho an'ny micropipettor.
Sarimihetsika PCR Membrane / PCR
PCR membrane ho an'ny takelaka PCR 96/384, lozisialy PCR membrane tsara, ho an'ny takelaka PCR 96/384, lovia fantsakana muti, famafao 100 am-paosy iray, kitapo 5 isaky ny tranga Misongadina: * Fitaovana: plastika PET tena matanjaka * Fampiasana: ampiasaina amin'ny holatra, bakteria ary kolontsaina mikraoba. * Azo apetaka hiarovana ny habaka sy tsara ho an'ny tontolon'ny laboratoara. * Mifanentana tsara, namboarina tamin'ny ankamaroan'ny masinina. * EO steril na tsy sterile * Fonosina anaty kitapo plastika vita amin'ny taratasy na kitapo plastika hisorohana ny fandotoana. * Availa ...
96 tsara 200lo takela pcr
384 lovia 40cr pcr tsara
Ny vokatra PCR dia amboarina, avy amin'ny virjiny voalohany, polypropylenes. Izany dia miteraka fantsona, fehikibo ary, toro-hevitra izay mampiseho fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny mangarahara, fahalemem-panahy, fahamendrehana, toetra manohitra ny entista ary ny fihenan'ny gazy.
Ny Freezing Vial no safidinao tsara indrindra mifototra amin'ny kalitao avo lenta sy fampiasa manokana. * Namboarina avy amin'ny PP sy PE maharitra * Azo alaina amin'ny boky 4: 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml ary 5.0ml * Ny famolavolana kapila mifamatotra dia miantoka tena mety ary tsy handray rano na fandotoana hafa ny firaketana mora * Ny fanakatonana misy gasket silikola dia azo atao ny misoroka ny famoahana rano * Saron-tsipika ho an'ny fiasan'ny tanana iray * Halavan'ny maripana: -196 ℃ -121 ℃ * Mora ...
Ny Centrifuge Tubes dia vita amin'ny polypropylene (PP), fitaovana polymer mangarahara, izay be mpampiasa amin'ny biolojika molekiola, ny simia klinika ary ny fikarohana biokimia.
© Copyright - 2010-2023: Zo rehetra voatokana.